DevOps Certification kwiGurgaon | DevOps Training in Gurgaon - ITS
I-DevOps Uqeqesho lweZatifikethi lunceda u-ace uxhumano oluqhubekayo kunye nokuvavanya, ukuhanjiswa okuqhubekayo kunye nokulungelelaniswa, ukujonga okuqhubekayo izixhobo, umzekelo, i-GIT, iJenkins, i-Puppet, i-Chef, i-Docker, i-Notable, i-SaltStack kunye ne-Nagios ukuze ibambe iqela kwi-SDLC.
I-DevOps ngumsebenzi wokudibanisa kokubili ukuPhuculo kunye neMisebenzi yeeNkqubo. Eli khosi lenzelwe ukukwenza ube ngumqeqeshi we-DevOps ngokunika izandla ukulungiselela izixhobo eziye zaphuhlisa njengeyona nto ye-lifo ye-DevOps.
I-IWebOps ye-intanethi yokulungiselela ilungiselelwe kukunceda ube nguchwepheshe we-DevOps. Kule khosi, ootitshala bethu be-DevOps ootitshala baya kukunceda:
Ngaphandle kweengongoma ezikhankanyiweyo ngaphambili, ukukunceda iAce amadivayisi awaziwa kakhulu amadivayisi we-DevOps, uya kufumana iikholeji ze-4 ezongezelelweyo ezizimeleyo ezibandakanya ukubonisa, ukurekhodwa kweklasi, izabelo, iimpendulo zezixhobo ezihamba kunye:
Ngakwazi – Ukuqulunqa isingeniso, Ukusetha kunye nokuCwangciswa, iincwadi ezingabonakaliyo zokudlala, ii-37 iimodyuli ezichanekileyo, imiSebenzi eyahlukeneyo kunye nokusetyenziswa kweMigqa yokuLawula.
intloko – Ukuqulunqa isingeniso, Ukwakha incwadi yePook, iNode yeNode kunye noPhando, Iingxowa zedatha, indawo ye-Chef, Imisebenzi, Ukuthumela iiNode kwi-Production kunye nokusebenzisa i-Open Source Chef Server.
IPopu – Ikhupha iZibonelelo zePhuppet kunye nomjikelezo wokuhamba, uLwimi lwePhupet, uLawulo lweZingqongileyo kunye neeModyuli, Ukubonelela ngeeNkonzo zeWebhu kunye neeModyuli zokuSebenza kuMlawuli wePopu.
Ngubani omele ahambe kule khosi?
I-DevOps iingcali ziphakathi kweengcali ze-IT ezinomdla kakhulu namhlanje, kwaye inzala yemakethe ikhula ngokukhawuleza. Ngokunyuka kwamalungu omsebenzi omtsha malunga ne-DevOps logic, nabani na ofuna ukungena kule ndawo, bangathatha le nkqubo ye-DevOps. Ezinye zala ma candelo zi:
There are no particular requirements to end up distinctly a DevOps Practitioner. Anybody with fundamental involvement in IT or essential information of Linux kunye neNethwekhi zingaguqukela kwi-DevOps Practitioner.
Yiba nephepha lewebhu le-spurious usebenzisa i-Apache Web Server.
Yenza i-shell shell echaza:
Iinkqubo ezahlukeneyo zeesakhelo ezichongiweyo kunye nabaxhasi kunye ne-OS.
Iinkcukacha ezichongiwe ngomthwalo kwiseva.
Iifom ze-5 eziphezulu kunye nenani elikhulu lomtya.
Hlela ulawulo ngememori
Yenza i-Nagios kwi-Hub ye-VM yokujonga ipharamitha eyahlukileyo ye-VM.
1. Isingeniso kwiDevOps kunye neemfuneko zayo
Subjects – I-DevOps, i-DevOps Imigaqo, i-DevOps Imfuneko, i-DevOps Iingxaki kunye neZisombululo, Ukwenza uguqulelo lwe-DevOps, Ukuchonga izithintelo zentlalo kunye nokubetha, Ukwakha i-Accountability kunye neTrust, Ukuqonda izakhiwo ze-Infrastructure kunye neMingeni yazo, Ukuqonda ukungahambi kakuhle kunye nokufumaneka, i-Networking Concepts evela kwindawo nembono.
2. Ukumamela abaSebenzi beZibonelelo eziqhelekileyo
Objectives – Kule modyuli, uya kufumanisa malunga neeNkonzo zoNxibelelwano ezahlukeneyo, ukuCwangciswa kwazo kunye nokuSebenza.
3. Ukuhlaziya ngokuzenzekelayo Ukufakwa kweeNdawo kunye neMisebenzi
Modules – Ukufakwa kwee-Linux Servers esebenzisa i-PXE iqhosha okanye iqhinga lokuqalisa ukukhawulela, ukusekwa kwe-Yum archive kunye nokuphuculwa kwekhokelo ngokuzenzekelayo. Ukulungiswa kwe-SVN kunye ne-GIT.
4. Ukuqwalasela iinjongo zokulungiswa kweNtsebenzo kunye noKhuseleko olubalulekileyo lweZiseko
Objectives – Kule modyuli, uya kufumanisa malunga neNtsebenzo yezakhiwo zeZibonelelo kwiinkalo zobume beShishini kunye nokuphunyezwa koKhuseleko ukuze kwenziwe indawo ekhuselekileyo.
Labs – Ukuphuculwa kweNkqubo yokuZenzekelayo, i-SVN kunye ne-Git Configuration kunye nee-Tables ze-IP.
5. Ukusekwa kunye nokulungiswa kweJenkins kunye nePopu
Objectives – Kule modyuli, uya kufumana malunga nokuFakela kunye nokuCwangciswa kweJenkins kunye nePopu.
Modules – Ukufakwa kweJenkins, Ukuqinisekiswa ngeLDAP, UNIX kunye nokunye, Ukuhlanganiswa kunye ne-SVN, ukusetyenziswa kwe-Outdoors, Ukufakwa kwe-Puppet kunye noqwalaselo, Imiboniso yePopu kunye nemifanekiso, I-Puppy ne-SVN.
Labs – Ukusekwa kweJenkins kunye nokuseta, i-Jenkins kunye ne-SVN yokujoyina, i-Jenkins ukuqhutyelwa kude, Yakha umsebenzi ngokuthumela i-imeyile, ukusekwa kwebhola kunye nokuCwangciswa, imifanekiso yokubonakalisa iPhupta, ukusekwa komsebenzisi, ukusekwa kwe-Tomcat, ukusekwa kwe-Apache kunye no-MySql utshintsho lweparameter.
Objectives – Kule modyuli, uya kufumanisa malunga neentonga kunye neebhontshi zeeNcwadi eziPhezulukileyo, ezinokuLinganiswa, UkuNgeniswa okuNgenakwenzekayo / UkuPhathwa kweDynamic, Iipatheni ezingabonakaliyo.
Modules – Izibonelelo ezifana neKhowudi, ukuFakeka okungenakwenzeka, isakhiwo soNxibelelwano esinokuLungiswa, iiNcwadi zokuHlola ezingabonakaliyo, ukuBakho okuNgenakwenzekayo / ukuSebenza okuMandla, iiMatriki ezingabonakaliyo, iiSkripthi zeSampula, i-SALTStack States, i-SLS kunye namaxwebhu aphezulu, ii-Spacepaces, i-Renderers, iimodyuli eziHlomelo, ukuLungisa.
Labs – Ukufakwa okungaqhelekanga, iiNcwadi zokuHlola ezingabonakaliyo, Ukufakwa kosawoti, Ukusetyenziswa kweTyuwa.
7. Kunye neChef
Labs – Izitambo zendlela yokuLawula: I-Chef kunye neNqununu yemiyalelo.
8. Ukuhlola, ukuLungisa, iiTatcat kunye neNkqubo zoLwimi
Labs – Ukusekwa kweSyslog kunye neemeko, Ukujika kwelogi, ukuyila kwe-Nagios kunye nokusetha ukugcinwa kwee Linux kunye ne-LDAP kunye noJenkins.